Review Top 6 máy in màu giá rẻ tốt nhất nên mua năm 2020 | Muasalebang - Muasalebang
Review Top 6 máy in màu giá rẻ tốt nhất nên mua năm 2020 | Muasalebang
Đang Đọc: Review Top 6 máy in màu giá rẻ tốt nhất nên mua năm 2020 | Muasalebang in Muasalebang
Namuhla, esikhundleni sokusebenzisa amaphrinta amnyama namhlophe, abantu bavame ukubheka ukuthenga iphrinta yombala kuna. Umkhiqizo uzokusiza ukuba ube nezithombe ezimibalabala nezincwajana ngokushesha.
1 Iyini iphrinta ye-laser yombala?
1.1 Izinhlobo ezidume kakhulu zamaphrinta ombala namuhla
2 Ngakho-ke kufanele uthenge i-inkjet noma iphrinta ye-laser yehhovisi?
3 Imibandela yokuthenga iphrinta yombala eshibhile engcono kakhulu ngo-2020
3.1 Qonda izidingo zabasebenzisi
3.2 Ingakanani intengo ephusile yephrinta ye-inkjet yombala?
3.3 Ukuqina kwenjini yephrinta yombala
3.4 Ukulungiswa kwe-DPI akukho phansi kakhulu
3.5 Yonga izindleko zamakhatriji ayinki, iphepha lokuphrinta
3.6 Umsebenzi wephrinta yombala
3.7 Ikhono lokuxhuma, ukudlulisa idatha
3.8 Ungathenga kuphi iphrinta ehloniphekile?
4 Linganisa amaphrinta emibala ayi-6 ashibhile aphezulu, okungcono kakhulu ongawathenga ngo-2020
4.1 1. I-Canon Pixma G1010. Iphrinta ye-Inkjet yombala
4.2 2. Canon 6770. Iphrinta yombala
4.3 3. Iphrinta ye-Epson L310
4.4 4. I-Epson L1800
4.5 5. OKI C332dn . Iphrinta yombala
4.6 6. UMfowethu DCP-T710W Iphrinta Ye-Inkjet Yombala Wokukodwa
Iyini iphrinta ye-laser yombala?
Lona umkhiqizo osiza abasebenzisi ukuthi baphrinte izithombe ezimibalabala. Ukusuka lapho, ungathola amadokhumenti aphrintiwe ngombala noma izimemo, izembozo zezinhlamvu. Lolu hlobo lwephrinta luzoxhumeka kukhompuyutha futhi luphrinte izithombe nombhalo ngombala ovela kukhompuyutha. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo ungakopisha futhi uskene ngombala kalula.
Izinhlobo ezidume kakhulu zamaphrinta ombala namuhla
Lo mkhiqizo uhlanganisa izigaba ezimbili eziyinhloko:
Amaphrinta e-inkjet: asebenza ngendlela efafaza uyinki ngokucophelela ephepheni eliphrintiwe. Ukusuka lapho, dala imibhalo ecacile, enemibalabala nezithombe.
Iphrinta ye-laser yombala: Lo mkhiqizo usebenza ngokuveza i-laser beam ibe idivayisi ebizwa ngokuthi isigubhu kazibuthe. Khona-ke isigubhu kazibuthe sizoxhumana nephepha lokuphrinta futhi lenze iphepha libonise umbala ozophrintwa.
Ngakho-ke kufanele uthenge i-inkjet noma iphrinta ye-laser yehhovisi?
Womabili lawa maphrinta ombala mahle kakhulu futhi akalelwe ikhwalithi ephezulu. Noma kunjalo, amaphrinta we-laser asenezinzuzo eziningi kuneminye imikhiqizo. Amaphrinta e-inkjet awakwazi ukuphrinta amadokhumenti abukhali amasayizi amancane. Ngesikhathi esifanayo, isivinini salo mshini asisheshi kakhulu.
Ngokuqondene nemikhiqizo ephrintwe nge-laser, ingaphrinta kahle nakuba izithombe nombhalo kuncane ngosayizi. Isivinini sokuphrinta namandla okuphrinta kokubili kuvelele. Lo mkhiqizo ulungele amahhovisi avame ukudinga ukuphrinta.
Imibandela yokuthenga iphrinta yombala eshibhile engcono kakhulu ngo-2020
Qonda izidingo zabasebenzisi
Ngaphambi kokuba ufune ukuthenga umkhiqizo, udinga ukunquma ukuthi yini okudingeka uyithenge. Ngoba kunemikhiqizo enokusetshenziswa okuningi, kodwa ngezici zakho zobungcweti, awudingi ukuzisebenzisa. Lokhu kuzomosha imali yakho.
Uma uyisisebenzi sasehhovisi futhi udinga ukuphrinta amadokhumenti njalo, khetha umkhiqizo onesivinini esisheshayo. Uma ungumthwebuli wezithombe, kufanele ukhethe imikhiqizo enokulungiswa okuphezulu. Abathwebuli bezithombe kufanele futhi bakhethe amaphrinta abukhali kakhulu.
Ingakanani intengo ephusile yephrinta ye-inkjet yombala?
Imikhiqizo inamanani asukela ezigidini ezi-2 kuye kweziyi-10 kuye ngohlobo, izici namaphromoshini. Imikhiqizo eshibhile kakhulu ingase ingabi eyangempela. Kufanele ucwaninge ngokucophelela ngaphambi kokuthenga ukuze ugweme izimpahla zomgunyathi nezike zasetshenziswa.
Ukuqina kwenjini yephrinta yombala
Kufanele uthenge imikhiqizo enokuqina okuphezulu kwenjini yize inenani elithe xaxa kunemikhiqizo eshibhile. Iphrinta enokuqina okuphezulu izokusiza ukuthi uyisebenzise isikhathi eside, enezinkinga ezincane uma uyisebenzisa. Uzokonga imali eningi uma uyisebenzisa.
Ukulungiswa kwe-DPI akukho phansi kakhulu
Ukulungiswa kuyisici esibalulekile kwikhwalithi yokuphrinta yomkhiqizo. Umshini unokulungiswa okukhulu, isithombe nombhalo wombala uma uphrintiwe kuzoba bukhali. Uma uthenga umkhiqizo nge-DPI elinganiselwa ku-4800 x 1200 kunengqondo.
Uma uthenga umkhiqizo onokulungiswa okuphansi, okuphrintiwe kuzofiphaliswa. Khona-ke idokhumenti yakho ngeke isaba yinhle njengesifanekiso sokuqala kukhompyutha. Ngakho-ke udinga ukubuyekeza ngokucophelela le mininingwane ngaphambi kokuthenga.
Yonga izindleko zamakhatriji ayinki, iphepha lokuphrinta
Amaphrinta ombala asebenzisa uyinki omningi kunamaphrinta amnyama namhlophe, futhi izindleko zikayinki wombala zibiza kakhulu. Ngakho-ke udinga ukukhetha imikhiqizo lapho uphrinta ukuze ulondoloze uyinki. Imikhiqizo esezingeni eliphezulu enamanani aphezulu ivamise ukuhlonyiswa ngalesi sici. Nakuba intengo yokuthenga iphezulu, iyonga kakhulu kuwe ngokuhamba kwesikhathi.
Umsebenzi wephrinta yombala
Kufanele usekelwe emsebenzini womkhiqizo ozowukhetha. Imisebenzi ewusizo yale phrinta ukuphrinta okunezinhlangothi ezi-2, ukuskena, nokwenza amakhophi. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo ungaphrinta umbala ezintweni ezingezona zephepha njengendwangu, usilika noma ikhadi eliqinile.
Udinga nje ukukhetha umkhiqizo onomsebenzi okufanele uwusebenzise. Ngoba uma ungadingi ukusebenzisa yonke le misebenzi, imosha kakhulu. Sicela ucabangisise ngaphambi kokuthenga ukuze ukhethe umkhiqizo ofaneleka kakhulu.
Ikhono lokuxhuma, ukudlulisa idatha
Kufanele ukhethe umkhiqizo okwazi ukuxhuma embobeni ye-USB kanye nenethiwekhi ye-wi-fi enhle. Ebhokisini lomkhiqizo kuzobhala imininingwane yokuxhuma komshini. Sicela ubheke lo mkhiqizo ngokucophelela ukuze uthenge umkhiqizo ofanele onokuxhumana okuhle, ukusekelwa okungcono kokuphrinta umbhalo.
Ungathenga kuphi iphrinta ehloniphekile?
Lo mkhiqizo awutholakali kuzo zonke izitolo zikagesi. Kodwa ungayithenga kalula kumasayithi e-e-commerce ahloniphekile. Kufanele uthenge kumasayithi afana ne-tiki, i-Shopee, i-Lazada, … ukuze uthenge imikhiqizo esezingeni eliphezulu.
Linganisa amaphrinta emibala ayi-6 ashibhile aphezulu, okungcono kakhulu ongawathenga ngo-2020
1. I-Canon Pixma G1010. Iphrinta ye-Inkjet yombala
ICanon wumkhiqizo odume kakhulu wamakhamera we-inkjet anombala namaphrinta. I-Pixma G1010 ingelinye lamaphrinta enkampani athengiswa kakhulu anezinzuzo eziningi ezivelele.
Idizayini ehlangene, yesimanje enombala omnyama kanokusho, amakhona ayindilinga athambile enza kube lula ukuyibeka endaweni yedeski noma yehhovisi.
Ukufaka nokufaka abashayeli, indodakazi yami ingakwazi ukuzitholela yona ngokwayo
Isithombe engisiphrinte ezingeni elijwayelekile sibukhali impela. Uma ufuna imininingwane eyengeziwe, phrinta phezulu. Izithombe zizoba zinhle kakhulu uma uphrinta izithombe ezithathwe emshinini we-Dlsr, uyinki ukhululekile
Isivinini sokuphrinta esisheshayo
Intengo ezwakalayo, Iza nama-cartridge ayinki ayi-4 wangempela
Kwesinye isikhathi kuba khona ujamu wephepha
Ayikwazi Ukuphrinta noma ukukopisha izinhlangothi ezi-2
– Intengo: 1,820,000 VND
2. Canon 6770. Iphrinta yombala
Lona umugqa wephrinta odume kakhulu emikhiqizweni yeCanon. ICanon iyinhlangano yamazwe ngamazwe evela eJapane ethandwa kakhulu. Le phrinta ye-inkjet yenkampani izoletha isipiliyoni esihle kubasebenzi basehhovisi.
BHEKA INANI ELIHLE KAKHULU KWA-TIKI
Ifaka isivinini sokuphrinta esisheshayo esingu-10.4 ppm. Esikhathini esifushane uzoba ngumnikazi wephepha elinemibala eliphelele.
Ukuxhunywa kunethiwekhi enhle engenantambo kwenza kube lula ukuphrinta imibhalo eminingi ebalulekile.
Ngokulungiswa kwesithombe okuphezulu okungu-9600 x 2400dpi, umbhalo nezithombe zingaphrintwa ngokucacile.
Ikhatriji ye-toner yomkhiqizo inomthamo omkhulu ngokuphindwe izikhathi ezingu-2.6 kune-cartridges evamile. Lokhu kukusindisa ekubeni ushintshe uyinki njalo, kulondoloze imali.
Ayikhethi ngephepha, ingaphrinta izinhlobo eziningi zephepha ezinobukhulu obuhlukahlukene njengephepha elingenalutho, iphepha elicwebezelayo, iphepha lesithombe.
Ayigcini nje ngokuphrinta ephepheni elivamile le-A4, kodwa futhi iphrinte ibe yinkulu njenge-A3.
Injini eqinile yomshini kufanele ibe nomthamo wezindaba ezinhle ongafika kumashidi ayi-12,000 ngenyanga. Ngakho-ke, umkhiqizo ufanelekile ukusetshenziswa emahhovisi amakhulu adinga ukuphrinta okuningi.
Ububi: Umkhiqizo unemibala eyinki engu-4 kuphela, ngakho awukwazi ukuhlanganisa imibala yokuphrinta eyinkimbinkimbi.
Intengo yephrinta yombala weCanon G1010: 3,990,000 VND
3. Iphrinta ye-Epson L310
Iphrinta ye-Epson L310 iwumkhiqizo we-Seiko Epson Corporation yase-Japan. Lo mkhiqizo ungowomdondoshiya embonini yokukhiqiza amaphrinta. Ngakho-ke, imikhiqizo yenkampani ihlale yaziswa. Lolu hlobo lwephrinta ye-inkjet luwumkhiqizo oguquguqukayo onokusetshenziswa okuningi okulula.
Awukwazi nje ukuphrinta izithombe zesampula kukhompuyutha yakho, kodwa futhi ungakopisha izithombe ezinemibala.
Ngenzwa ye-CIS, ukuskena kwesithombe sombala nakho kwenziwa ngokushesha.
Umkhiqizo uyahambisana nezinhlelo zokusebenza eziningi ezihlukene ezifana neWindow, Vista, XP,… Iphrinta ingaxhuma kahle nembobo ye-USB 2.0.
Ifanele ukusetshenziswa emahhovisi, ezitolo zezithombe, ukuphrinta izithombe.
Ngethreyi yephepha enkulu efinyelela kumashidi ayi-100, awudingi ukwengeza iphepha njalo lapho uphrinta.
Inokulungiswa okujwayelekile okungu-5760 x 1440dpi, ngakho-ke noma isithombe sisincane, imininingwane isabukhali.
Lena iphrinta yombala eshibhile, elingana nosayizi we-smartphone.
Ububi: inesivinini sokuphrinta esinensa yamakhasi angu-5 anombala ngomzuzu, ifanele izitolo ezincane zamahhovisi kuphela.
Intengo yokuthengisa: 3,490,000 VND
4. I-Epson L1800
Iphrinta ye-Epson L1800 iyintandokazi yalo mkhiqizo. Kufanele uthenge le phrinta uma udinga ukuphrinta izithombe ezinkulu namabhodi wokukhangisa. Lokhu kuzoba inketho esheshayo neyongayo kuwe.
BHEKA INANI ELIHLE KAHLE E-PHONGVU
Inokulungiswa okuphezulu kakhulu uma kuqhathaniswa namaphrinta ajwayelekile angu-5760x1440dpi.
Umkhiqizo ungaphrinta kumasayizi wephepha ahlukene amakhulu namancane ngobukhali obukhulu njengephepha le-A3, A4, A5 A6.
Ingakwazi ukuxhuma imbobo ye-USB ngokushesha.
Ukuphrinta okuzenzakalelayo kwezinhlangothi ezi-2 kuyenzeka, awudingi ukwenza imisebenzi eyenziwa ngesandla.
Ukuba nobunikazi bemibala ye-inki engu-6 kufanele ngaso sonke isikhathi kukhiqize izithombe eziseduze nesithombe soqobo. Awudingi ukukhathazeka mayelana nemibala yokuphrinta engekho ejwayelekile.
Ifakwe okusalungiswa okulula kanye nezindlela zokuphrinta ezimnyama nezimhlophe.
Ububi: ngaphezu kokuphindwe kabili kwentengo uma kuqhathaniswa neminye imikhiqizo yohlobo olufanayo.
Intengo yokuthengisa: 14,000,000 VND
5. OKI C332dn . Iphrinta yombala
Le phrinta ye-laser enombala iwumkhiqizo wenkampani yase-Japan ye-Ok eyazalwa ngo-1881. Isiqubulo somkhiqizo sithi “OKI – Ukuphrinta Okuhle” ukuletha izithombe ezinhle kakhulu eziphrintiwe ngombala. Idalwe ithimba labasebenzi abanolwazi, ngakho-ke yethenjwa kakhulu.
Njengephrinta ye-laser, ikwazi ukuphrinta ngokushesha okukhulu amakhasi anombala angama-26 ngomzuzu. Lo mkhiqizo unesivinini sokuphrinta esisheshayo esingu-30% kunemikhiqizo yangaphambilini
Iphethe umthamo omkhulu wesitoreji onenkumbulo efika ku-3GB.
Sebenzisa uyinki we-wax we-HD ukuze usize imibala ebukhali nemifanekiso egqamile, ingabuni.
Ifakwe ukuphrinta kwe-duplex okusheshayo, ukuphrinta okunezinhlangothi ezimbili kungenziwa ngesikhathi esifushane.
Akukona nje kuphela ukuphrinta ephepheni, kodwa futhi ukuphrinta kwezinye izinto ezifana amakhadi, amakhadibhodi. Lokho kungenxa yenjini yomshini engasebenza ngezinto ezinobukhulu obuhlukahlukene.
Ingasetshenziselwa ukuphrinta izibhengezo zokukhangisa ezinosayizi abakhulu.
I-cartridge ye-toner yomkhiqizo inomthamo omkhulu, okungaba amashidi angu-1,500.
Ifanele izitolo eziphrinta izimemo, amakhava ezincwadi namakhathalogi.
Injini yomshini isiza ukuvikela amadokhumenti nezithombe eziphrintiwe. Lokhu kusiza ukuvikela imiklamo ephrintiwe ukuthi ingavuzi.
Intengo yokuthengisa: 8,390,000 VND
6. UMfowethu DCP-T710W Iphrinta Ye-Inkjet Yombala Wokukodwa
UMfowethu u-DCP-T710W uwumkhiqizo wokuphrinta umbala wenhlangano ye-Brothers corporation osekunesikhathi eside ikhona evela e-Japan. Lo mkhiqizo udume kakhulu futhi usukhona emazweni angaphezu kuka-44. Nakuba kungumkhiqizo osezingeni eliphezulu, umshini wenziwa ePhilippines, ngakho intengo iyathengeka.
I-cartridge ye-toner inomthamo omkhulu kakhulu wamashidi angu-5,000, yonga kokubili isikhathi nemali uma uphrinta.
Kukhona ithreyi elikhulu lephepha elinamashidi ayi-150, asikho isidingo sokushintshwa kwephepha njalo.
Inokusebenza kwesikrini se-LCD okulula ukukusebenzisa, imisebenzi embalwa nje ingaphrinta amadokhumenti ngokushesha.
Yiba nokuxhumana okuhle ku-inthanethi nenethiwekhi ye-wi-fi ukuze usekele ukuphrinta.
Hhayi kuphela ekwazi ukuphrinta, kodwa futhi ekwazi ukuskena nokuthwebula ngombala.
Inokulungiswa okuphezulu okungu-1200 x 6000dpi.
Ifaka ukuphindaphinda kwephepha okusheshayo ukuze kuphrintwe okunezinhlangothi ezi-2.
Umkhiqizo awukwazi nje ukuxhuma kwikhompyutha ukuze uphrinte, kodwa futhi ungaxhuma kuma-smartphone namaphilisi.
Inesivinini sokuphrinta esijwayelekile samashidi ombala ayi-10 ngomzuzu.
Cons: isisindo 7.8kg, kunzima ukunyakaza.
Intengo yokuthengisa: 4,650,000 VND
Uma ungumnikazi wephrinta yombala, uzothola izithombe ezimibalabala ngokushesha. Umkhiqizo ungumngane ophumelelayo ukukusiza emsebenzini wokunyathelisa ehhovisi. Uma udinga ukuthenga lo mkhiqizo, sicela ubhekisele kumabhrendi ahloniphekile angenhla.
Xem Thêm Máy rửa bát Bosch SMS88TI03E | Muasalebang
Hướng dẫn chi tiết cách ghép ảnh trên điện thoại Samsung | Muasalebang
Chia sẻ cách làm lẩu hột vịt lộn siêu ngon, cực dễ ngay tại nhà | Muasalebang